अनिल कुमार झाको प्रश्न : सरकार दुधे बालक जस्तो जिद्दी गर्न मिल्छ ? | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more
अनिल कुमार झाको प्रश्न : सरकार दुधे बालक जस्तो जिद्दी गर्न मिल्छ ?
जेठ २९ गते, २०७६ - १२:२१
काठमाडौं । राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)का सांसद अनिल कुमार झाले सरकारले राज्य व्यवस्था समितिको निर्देशन नमानेर दुधे बालक जस्तो जिद्दि गरेको आरोप लगाएका छन् । बुधबार संसदमा बोल्दै सांसद झाले जनप्रतिनिधिहरुको तर्फबाट दिएको निर्देशनलाई सरकारले अटेर गरेकोमा आपत्ति जनाए ।
उनले जनप्रतिनिधिको निर्देशन उल्लघंन गर्न मिल्छ भन्दै प्रश्न गरे । उनले भने, ‘सरकार दुधे बालक जस्तो यो गरेर छाड्छु भनेर जिद्दी कसेको छ । सम्बन्धित जनप्रतिनिधिहरुको अधिकार प्राप्त गरेर बसेको समितिले दिएको निर्देशन किन मानेको छैन् ? राज्य व्यवस्था समितिले दिएको निर्देशनलाई किन सरकारले उल्लंघन गर्न खोजेको हो ?’
सांसद झाले संवैधानिक आयोगको रुपमा रहेको लोकसेवाले संविधान बर्खिलाप गर्न मिल्छ भन्दै प्रश्न गरे । उनले संविधानकै मुल मर्मको रुपमा रहेको समावेशीताको भावनालाई उल्लंघन गर्दा सहि व्यवस्था स्थापित नहुने बताए ।
जेठ २९ गते, २०७६ - १२:२१ मा प्रकाशित